Nhau dzeBhaibheri: Jona Nehove Huru - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Tarira murume ari mumvura. Ari muchinetso chikuru, haaziri here? Hove iyo yodokumumedza! Unoziva kuti ndiani murume uyu here? Zita rake ndiJona. Ngationei kuti akapinda sei muchinetso chikurusa.
Jona muprofita waJehovha. Haiziri nguva refu pashure porufu rwomuprofita Erisha apo Jehovha anoudza Jona kuti: 'Enda kuguta guru reNinevhe. Ushati hwavanhu ikoko hukuru kwazvo, uye ndinoda kuti utaure kwavari pamsoro pahwo.'
Asi Jona haadi kuenda. Saka anokwira chikepe chinoenda kurumwe rutivi rweNinevhe. Jehovha haafadzwi nokutiza kwaJona. Saka anoparira dutu guru. Rakashata kwazvo zvokuti chikepe chiri mungozi yokunyura. Vakwasvi vanotya zvikuru, vanodanidzira betsero kuvamwari vavo.
Pakupedzisira Jona anovaudza kuti: 'Ndinonamata Jehovha. Mwari akaita denga napasi. Uye ndiri kutiza kuita zvandakaudzwa naJehovha kuita.' Zvino vakwasvi vanoti: 'Tinofanira kukuitirei kumisa dutu?'
'Ndikandirei mugungwa, uye gungwa richateramazve,' anodaro Jona. Vakwasvi havadi kukuita, asi dutu zvarinoipisisa pakupedzisira vanokanda Jona mumvura. Pakarepo dutu rinomira, gungwa ndokuteramazve.
Jona zvaanonyura mumvura, hove huru inomumedza. Asi haafi. Kwamazuva matatu nousiku hutatu iye ari mudumbu rehoveyo. Jona anozvidemba kwazvo kuti haana kuterera Jehovha ndokuenda Ninevhe. Zvino unoziva chaanoita here?
Jona anonyengetera kuna Jehovha nokuda kwebetsero. Ipapo Jehovha anoita kuti hove irutsire Jona panyika yakaoma. Pashure paikoko Jona anoenda Ninevhe. Ikoku hakuzati kuchitidzidzisa kuti kunokosha sei here kuti tiite chipi kana chipi chinotaura Jehovha?
Bhuku reBhaibheri raJona
Jona ndiani, uye Jehovha anomuudza kuti aitei?
Nokuti haadi kuenda kwaanoudzwa naJehovha, Jona anoitei?
Jona anoudza vakwasvi kuti vaitei kuti vamise dutu?
Sezvaunogona kuona mumufananidzo uyu, chii chinoitika Jona paanonyura mumvura?
Jona anova mudumbu rehove huru kwenguva yakareba zvakadini, uye anoitei ari imomo?
Jona anoenda kupi pashure pokunge abuda muhove huru, uye izvi zvinotidzidzisei?
Verenga Jona 1:1-17.
Sezviri pachena, Jona akanzwa sei pamusoro pebasa rake rokuparidza kuNinevhe? (Jona 1:2, 3; Zvir. 3:7; Mup. 8:12)
Verenga Jona 2:1, 2, 10.
Zvakaitika kuna Jona zvinotipa sei chivimbo chokuti Jehovha achapindura minyengetero yedu? (Pis. 22:24; 34:6; 1 Joh. 5:14)
Verenga Jona 3:1-10.
Tinowana kurudziro ipi pakuti Jehovha akapfuurira kushandisa Jona pasinei nokumbokundikana kwake kuita basa rake pakutanga? (Pis. 103:14; 1 Pet. 5:10)
Zvakaitika kuna Jona nevaNinevhe zvinotidzidzisei pamusoro pokufanotonga vanhu vari mundima yedu? (Jona 3:6-9; Mup. 11:6; Mab. 13:48)